Ukuphela kokwesekwa kukaDebian Lenny | Kusuka kuLinux
Kulezi zinsuku, uchungechunge lwezehlakalo ezibalulekile ezihlobene ne- Isofthiwe yamahhala ukuthi asikwazanga ukwabelana nawe ngenxa yezinkinga ezithile ngokuxhumeka kwethu.
Ngokusobala izinto azizukuthuthuka, ngakho-ke ngithatha leli thuba ukukushiyela izwi nezwi isimemezelo esenziwe ku- iwebhusayithi ye-debian Mayelana nokuphela kweSupport ye I-Debian GNU / Linux 5.0 (aka Lenny). Kusukela ekuqaleni sibonga umsebenzisi 103 ngokusazisa nge-imeyili.
1 Ukwesekwa kwezokuphepha kweDebian GNU / Linux 5.0 kuphele ngoFebhuwari 6
2 Izibuyekezo zokuphepha
3 Ukuthuthukela ku-Debian 6.0 aka Squeeze
4 Mayelana noDebian
5 Imininingwane yokuxhumana
Ukwesekwa kwezokuphepha kweDebian GNU / Linux 5.0 kuphele ngoFebhuwari 6
Ngonyaka owodwa ngemuva kokukhishwa kwama-alias we-Debian 6.0 Cwilisa futhi cishe eminyakeni emithathu ngemuva kokukhishwa kwama-aliases we-Debian GNU / Linux 5.0 Lenny , ukusekelwa kokuphepha kokusabalalisa okudala okudala (iziteketiso eziyi-5.0 Lenny ) yaphela ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Iphrojekthi ye-Debian iyaziqhenya ngokuxhasa ukwabiwa okuzinzile okudala isikhathi eside, futhi ngisho nonyaka ngemuva kokukhishwa kwenguqulo entsha.
Iphrojekthi ye-Debian ikhishwe iziteketiso ze-Debian 6.0 Cwilisa ngoFebhuwari 6, 2011. Abasebenzisi nabasabalalisi banikezwe isikhathi sonyaka owodwa ukuvuselela ukufakwa kwabo okudala kukusatshalaliswe okuzinzile kwamanje. Ngakho-ke, ukusekelwa kokuphepha kokusatshalaliswa okungu-5.0 kwaphela ngoFebhuwari 6, 2012 njengoba kwakumenyezelwe ngaphambili.
Ukuvuselelwa kokuphepha okwakumenyezelwe ngaphambilini ukuthi kusatshalaliswe kuzoqhubeka nokutholakala ku-security.debian.org.
Ithimba Lezokuphepha le-Debian lihlinzeka ngezibuyekezo zokuphepha ekusatshalalisweni kwamanje ngehttp://security.debian.org/>. Izibuyekezo zokuphepha zokusabalalisa okuzinzile okudala nazo zinikezwa unyaka owodwa ngemuva kokukhishwa kokusabalalisa okusha, noma kuze kube yilapho ukusatshalaliswa kwamanje sekuphakanyisiwe, noma yikuphi okuza kuqala.
Ukuthuthukela kwizibizo ze-Debian 6.0 Cwilisa
Ukuthuthukela ku-Debian 6.0 kusuka ekusatshalalisweni kwangaphambilini, i-Debian GNU / Linux 5.0 aka Lenny , ziphathwa ngokuzenzakalela yithuluzi lokuphatha le-apt-get lokulawulwa kokulungiselelwa okuningi, nasezingeni elithile futhi ngethuluzi lokuphatha iphakethe lokufaneleka. Njengenjwayelo, amasistimu we-Debian GNU / Linux angavuselelwa ngaphandle kokuhlupheka, ngaphandle kokuphumula okuphoqelelwe, kepha kuyanconywa ukuthi ufunde khipha amanothi ukugwema ukuphazamiseka, kanye nemiyalo yokufaka nokuthuthukisa enemininingwane.
I-Debian wuhlelo lokusebenza lwamahhala olwenziwe izinkulungwane zamavolontiya avela emhlabeni wonke abambisana nge-Intanethi. Ukuzinikela kukaDebian ku-Free Software, ubunjalo bayo obungenzi nzuzo, kanye nemodeli yayo yokuthuthuka evulekile ikwenza kuhluke phakathi kokusatshalaliswa kwe-GNU / Linux.
Amandla amakhulu wephrojekthi ye-Debian ayisisekelo sokuzithandela, ukuzibophezela kwayo ku-Debian Social Contract, nokuzinikela kwayo ekuhlinzekeni uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu. I-Debian 6.0 ingesinye isinyathelo esibalulekile kuleso siqondiso.
Ngeminye imininingwane vakashela iwebhusayithi yakwaDebian ku- http://www.debian.org/, noma thumela i-imeyili ku .
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ukuphela kokwesekwa kukaDebian Lenny
Iminyaka engu-3 yokwesekwa ngicabanga ukuthi yisikhathi esifushane.
Angicabangi ukuthi lesi yisikhathi esifushane uma ucabanga ukuthi igatsha le-Debian "elidala kakhulu" uma liqhathaniswa nesoftware "ezinzile" liphelelwe yisikhathi. UDebian usigcinele ithuba elihle uhlelo oluzinzile isikhathi eside ngokusekelwa kwenqwaba yokwakhiwa, kungumsebenzi onzima kakhulu uma ucabanga ukuthi wukusatshalaliswa okuqhutshwa umphakathi ngokuphelele futhi akusekelwa ngokwezimali njengabanye. Kuleyo minyaka emithathu yokwesekwa, eyodwa yenzelwe ukuthi abasebenzisi babe nesikhathi sokuthuthuka besuka egatsheni elithi "oldstable" baye egatsheni "elizinzile", ngicabanga ukuthi le minyaka emithathu inomusa esikhundleni sokuncane. Kumele futhi ubone lesi simo kusuka kwenye indawo yokubuka, lokhu kusekelwa kufaka kuphela izibuyekezo zokuphepha, ngakho-ke kuthiwani ngokuvuselelwa kwesoftware? Imihlahlandlela kaDebian nokwenza izinqumo bekuhlala kungqinile ekuqondeni kwami ​​futhi ngenxa yalokho kuhlala kusatshalaliswa okunenhlonipho futhi okunethonya.
@ 103, kepha ucabanga ukuthi iseva yokukhiqiza, i-database ekhula kakhulu usuku nosuku eceleni kwezinye izinhlobo zolwazi kanye nenqubo yenqubo engu-24/7 engakaze ibonwe; ngikholwe ukuthi akuhlekisi ukuthuthela njalo eminyakeni emithathu.
Okunye ukusatshalaliswa okufana neRed Hat kanye nama-clones ayo (lokho kuzwakale kuhlekisa) anokusekelwa iminyaka eyi-7 futhi kungekudala nje isigqoko esibomvu sandise isikhathi saso saba yiminyaka eyi-10. Isizathu sokunikeza isikhathi eside kangako sihlobene nalokho engikushilo esigabeni sokuqala kanye nesikhathi esimhlophe sokugijima, okuyizinsuku zokuqala noma amasonto okuqala lapho "ukulungiswa kokugcina" kufanele kulungiswe kahle nokuthi uhlelo luzosebenza kuphi. engazinzile ngandlela-thile. Ngakho-ke akunangqondo ukufuduka njalo eminyakeni emithathu lapho kungenziwa njalo nge-3.
Kulolu hlobo lwesimo, izinkampani zinamasu afana nokwenza isipele noma amaseva we-virtualized noma ezinye ezincike kumuntu ngamunye. Uhlelo ekukhiqizweni lungaba 'ku-inthanethi' kuthi olunye lubuyekezwe futhi ngemizuzwana kube iseva eyinhloko.
Angicabangi ukuthi kuhle ukuqhathanisa iRed Hat neDebian ngale ndlela, iRed Hat ukusatshalaliswa okugxile ezindaweni zebhizinisi lapho izinto ezifana nalezi ozichazayo zenzeka khona, iDebian iqondiswe kuwo womabili amaseva, izindawo zebhizinisi kanye nedeskithophu, ngaphezu kwalokho esivele ichaziwe phambilini kunezinto eziningi, eziningi zokwakha namaphakeji okufanele agcinwe. Angigxeki imodeli kaRed Hat noma yikuphi okunye ukusatshalaliswa, ukuthi ukuphana kukaDebian akunakulinganiswa.
Kepha indawo yokukhiqiza enemishini eyishumi nambili ayifani naleyo enezinkulungwane ezimbalwa ...
@proper, iminyaka emithathu iphana impela uma ucabanga ukuthi i-debian ingeyomphakathi. Kunoma ikuphi, unenketho yokusebenzisa ubuntu (iseva) LTS, noma ukukhokhela iRedHat noma iSuSe Enterprise ..
Kungaba kuhle ukuba nayo okungenani kube ngu-5, kepha amaphutha ezokuphepha atholakala njalo futhi kunezibuyekezo eziphathelene nendlela yamafayela, amafomethi wohlelo lwefayela: kusuka ku-ext3 kuya ku-ext4 futhi manje yi-Btrfs; izinhlobo ezintsha zezinhlelo zokusebenza, kungakuhle ukuthi uhlale uhamba phambili nezinhlelo, noma ngabe iqiniso lokufuduka usuka kolunye uhlobo uye kolunye lifaka izindleko eziningi (kungaba isikhathi noma imali), kulapho inkinga ... 😐
Bengifuna ukuzama le distro futhi angikaze ngikwenze lokho kubuhlungu
Yebo, akukho okukuvimbela ukuthi ukwenze.
I-Debian isaphila futhi iphilile, kusele kuphela ukuxhaswa kwenguqulo engu-5.0, noma ngabe uma ufuna ngempela ukuzama leyo nguqulo, usengakwenza lokho. Kodwa-ke, ngincoma inguqulo 6.0, enendawo yokugcina ebuyekezwe kakhulu.